Accueil > Gazetin'ny nosy > Hanitra Razakaboana
Ho saziana izay sekoly tsy mampiakatra karama
Nanao fivoriana an-databatra boribory tao amin’ny hotel Carlton tao Anosy mahakasika ny famoronana asa sy ny fanasoavana ny fomba fiasa ny ministeran’ny asa sy ny fampanana asa omaly 24 may 2022. Niompana indrindra tamin’ny fanamahan-kevitry ny fanjakana izay fiatrehana ny krizy maro nahazo ny firenena tao anatin’ny roa taona ny lahadinika tamin’izany. Isany no dinihina tamin’izany ny mahakasika ny fanondrotana karama hoan’ny sehatra tsy miankina farany teo iny izay hampiharina manomboka ny volana may 2022 ity.
Ny tale ny fikambanan’ny sekoly tsy miakina eto Madagasikara Celin RAKOTOMALALA dia nanambara tamin’ny 03 may 2022 teo fa tsy ho afaka hampisondrotra ny karaman’ny mpiasa sy mpampianatra ao aminy satria tsy afaka hampisondrotra ny saram-pianarana mihitsy satria maro amin’ny ray amandrenin’ny mpianatra no efa tsy afaka mandoa izany intsony ankehitriny.
Namaly izany moa ramatoa Hanitra fitiavana Razakaboana izay tale jeneralin’ny ministeran’ny asa sy ny fampanana asa fa ho saziany izay sekoly tsy miankina ka tsy hampiakatra ny karama ny mpiasa ao aminy. Tsy tehahalala raha tsy ny lalàna ihany izy ka miala tsiny amin’izay tsy hanao izany fa ampiharina aminy ny sazy. Tsy rariny hoy izy raha toa ka mbola hajanona amin’ny karama 150 000 foana ny karaman’ny mpampianatra ireo.
Eo anatrehan’ny tenin’ny filohan’ny fikambanan’ny sekoly tsy miankina sy ny fanambaran’ny tale Jeneralin’ny asam-panjakana Hanitra fitiavana Razakaboana izay dia tsy maintsy ho maro izany ny sekoly tsy miankina eran’ny Madagasikara noho voasazy. Ny antsasakin’ny sekoly rehetra eto Madagasikara dia sekoly tsy miakina. Ho betsaka indray izany ny sekoly hikatona atsy ho atsy.
Inoana fa tsy maintsy hisy ny fihaonan’ny roa tota eo anatrehan’ity raharaha ity satria hitarika fanakatonana sekoly izany ary hiteraka koa savorivory eo amin’ny roa tota.